I-Alaska Kenai River Fishing Cabin # 2 Moose Cabin - I-Airbnb
I-Alaska Kenai River Fishing Cabin # 2 Moose Cabin
Amakhabethe ayi-5 ahlotshiswe ngendlela ehlukile asebenza njengesisekelo sakho sakho konke ukuzijabulisa kwakho kwe-Alaska! Ikhabethe ngalinye lingamamitha-skwele angama-500 futhi linekhishi elincane, ibhavu elineshawa yamathayela, ikamelo lokulala elilodwa nendawo yokulala. Ukufinyelela emfuleni i-Kenai ngokudoba uhambo olufushane ukusuka kukhabhinethi yakho. Amahektha ayi-13 avumela ithuba lokubona izilwane zasendle kuvulandi wakho ngenkathi uphuza ikhofi elivela kumenzi wekhofi wase-Keurig. Futhi sinezindawo ze-RV eziyisi-6 ezinama-hookups agcwele. Ukukhempa okomile. Ikhabhinethi yokuwasha enamawasha ohlamvu lwemali kanye nokomisa. Iphinde ibe nebhavu eyengeziwe enamaShower angu-2.
Amakhabethe e-Lone Moose Lodge e-Alaska angaba ngu-500 sqft. Amakhabethe e-Alaska ngokuvamile mancane. Imisebenzi eminingi ingaphandle futhi ingaphandle iba isandiso sesikhala sakho. Ikhabethe ngalinye linemihlobiso eyingqayizivele kanye nezakhiwo zemibhede ezihlukene.
4.94 · 156 okushiwo abanye
Sikumakhilomitha angu-1.5 ezansi ngo-Funny River Road ngaphesheya kwesikhumulo sezindiza. Ungakwazi ukundizela uphume ohambweni ukuze uyodoba noma ubuke ibhere futhi ubuke indawo. Ndizela ngendiza yakho uhambe uye kumakhabethe!
Ehlobo uzosibona sigijima sisebenza kule ndawo futhi ngezinye izikhathi sithola ithuba lokudoba! Sivamise ukuba nomuntu endaweni kusukela ngo-9am kuze kube u-9pm June, July and August. Simane sishayelwa ucingo zonke ezinye izikhathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Soldotna namaphethelo